Tranonkala vaovao momba ny horonantsary mahatsiravina miaraka amin'ny fanavaozana horonantsary horohoro ho avy
Ny Trailer feno ho an'ny Koreana Tatsimo an'ny Netflix, 'Hellbound' dia eto hitondra ny fanahinao
Ny 'The Hills Have Eyes' an'i Wes Craven's Desert Cannibal Center dia tonga amin'ny 4K UHD
'Gremlins 2: The New Batch's' Greta dia tonga amin'ny fanangonana Monster High
Reseo ny fialan-tsasatra Doldrums miaraka amin'ny Shudder amin'ny Novambra 2021!
Ny talen'ny 'Midnight Mass', Mike Flanagan dia te-hanao sarimihetsika mampihoron-koditra 'Star Wars'
Ny 'The Last Drive-In' an'i Joe Bob Brigg dia miverina amin'ny Halloween miaraka amin'ny 'The Walking Dead'
Ny tranon'i Nancy 'A Nightmare On Elm Street' dia trano fonenan'ny 'Bo Burnham's Inside' manokana.
'Ny Mpiambina ny Galaxy an'i Marvel' dia Opera an-habakabaka novolavolain'ny manam-pahaizana izay manapaka ny tany hatrany...
Nihena 700 tapitrisa dolara ny Franchise Halloween tao amin'ny Box Office
Ny tranon'i Nancy avy amin'ny 'A Nightmare on Elm Street' dia amidy!
by Trey Hilburn III Oktobra 26, 2021
by Trey Hilburn III Oktobra 26, 2021 288 hevitra
Ny tale, Yeon Sang-Ho (Train mankany Busan, Peninsula) dia mandefa antsika any amin'ny helo amin'ny harona tanana. Nidina ny tranofiara vaovao ho an'ny andiany farany ary toa mandeha…
by Trey Hilburn III Oktobra 26, 2021 52 hevitra
Ny anjaran'i Wes Craven tao amin'ny fianakaviana mpihinan-tany efitra tany hay, dia iray amin'ireo anaram-boninahitra tsy hay hadinoina an'ny talen'ny tale. Nahavita nampitahotra ny helo tamin'ny fianakaviana maro ny The Hills Have Eyes…
by Trey Hilburn III Oktobra 26, 2021 253 hevitra
Gremlins 2: The New Batch dia iray amin'ireo bonanza akondro be indrindra izay tonga teo amin'ny efijery lehibe. Ny fanaraha-maso an'i Joe Dante an'i Gremlins dia nanao izany ary…
by James Jay Edwards Oktobra 26, 2021
by James Jay Edwards Oktobra 26, 2021 64 hevitra
Hey Tightwads! Tonga ihany ny Halloween. Ireto misy sarimihetsika maimaim-poana mba hampahatezitra anao (bebe kokoa)… Halloween Andao atomboka amin'ny fomba mahazatra tsy misy dikany. Halloween dia…
by Trey Hilburn III Oktobra 26, 2021 1,628 hevitra
Ny kintan'ny Clueless Alicia Silverstone dia miverina amin'ny zavatra hafa kely. Last Survivors dia hametraka an'i Silverstone ao amin'ny tontolo aorian'ny apokaliptika izay tsy maintsy hivezivezena amin'ny tontolo mamitaka sy…
by Waylon Jordan Oktobra 25, 2021
by Waylon Jordan Oktobra 25, 2021 306 hevitra
Efa ho tapitra ny volana oktobra, saingy tsy mijanona ao amin'ny Shudder ny tahotra. Ny streamer rehetra mampihoron-koditra / mampientam-po dia manana anaram-boninahitra vaovao marobe manomboka amin'ny lampihazo mandritra ny volana ...
by Trey Hilburn III Oktobra 25, 2021
by Trey Hilburn III Oktobra 25, 2021 563 hevitra
Mike Flanagan vao avy nitsoka ny saintsika tamin'ny Mass Mamatonalina ary efa mieritreritra izay tetikasa mampihoron-koditra tiany hotanterahina manaraka izy. Ny tale izay…
by Trey Hilburn III Oktobra 25, 2021 346 hevitra
Ny The Last Drive-In an'i Joe Bob Brigg dia miverina amin'ny faran'ny herinandro amin'ny Halloween mba hanome antsika ireo horohoro tsy maty ao amin'ny The Walking Dead. Ny andiany AMC efa ela dia ho voatery…
by Trey Hilburn III Oktobra 25, 2021 519 hevitra
Ny Bo Burnham manokana an'ny Netflix, Inside dia fijery tonga lafatra momba ny horohoro sy ny dingan'ny fitokana-monina mandritra ny fanakatonana. Fantatra fa ny toeram-pamokarana…
'Mpiambina ny Galaxy an'i Marvel' dia Opera an-habakabaka novolavolain'ny manam-pahaizana izay manapaka ny tany tsy tapaka ary zava-bitany rehetra.
by Trey Hilburn III Oktobra 25, 2021 581 hevitra
Ampidiro amin'ny iray amin'ireo traikefa lalao mahafinaritra indrindra amin'ity lafiny Knowhere ity, y'all. Rehefa nandatsaka ny Guardians of the Galaxy tao amin'ny teatra ny talen'ny James Gunn dia lasa tampoka ...
Ny 'Lalao Squid' Prank dia manery an'i Netflix hanao fanovana vitsivitsy
Ny tranofiara 'Biby Anonymous' dia mampahafantatra tontolo iray ananan'ireo biby, hazalambo ary hamonoana ny olombelona
'Scream' Trailer dia fiverenana mahafinaritra any amin'ny Francais Slasher
Ilay tranofiara 'The Deep House' dia manome antsika endrika mampivarahontsana amin'ny trano iray manenjika anaty rano
Rob Zombie Shares Sary an'ny vita 1313 Mockingbird Lane; Trano 'Munsters'
'Crazy Samurai' dia manana 77-min voalohany manerantany. Hetsika horonantsary hetsika iray
Fotoana fampisehoana ho an'ny Tumbler Starbucks Glow-in-the-Dark Tumbler 'Beetlejuice'
Aogositra 8, 2021
'Labyrinth' dia miverina amin'ny teatra amin'ny faha-35 taonany!